Le besisikhungu esikhulu ukwenza ushishino! Umyalelo lo ngexesha kwaye ewuthanda sisebenza nabo ... Bahlawulwe ingqalelo iinkcukacha baze ngokwenene waliphulaphula koko kwafuneka ukuba sithi kunye namava yonke iyancumisa kakhulu Siza kwenza ishishini ngakumbi nabo. Thina bamangaliswa kakhulu indlela elungileyo isiNgesi babethetha yaye babhala nto leyo eluncedo gqitha ukusebenza kuzo zonke iinkcukacha ukuba umyalelo Benza indawo abaninzi ixesha umahluko ukunxibelelana kwaye banikezela ihlaziya yonke endleleni yaye kanye wenza konke lula kangangoko kunokwenzeka. Sincoma kakhulu kule nkampani.
Isimo soshishino kwancamisa, umgangatho imveliso kunye siqinisekiso kunye ngexesha delivery lwalubalasele. yaye inkoliso bonke baqonde ukuba ishishini kufuneka kwenziwa touch okusemandleni ngokweemvakalelo.
Niyabona kutheni China enye lizwe linamandla yaye inkulu ehlabathini nazo ngabo ububele lwabo nesisa.
Ndiya Sazisa ngamandla le nkampani ukuba ube iqabane lakho elizayo apho wena na ukuba uya kudana konke konke, ndiyathemba ulwalamano lwethu kunye nabo yokugqibela elide,
Awazi ukuba unokuba ibhokisi emangalisayo ngokupheleleyo
epha xa ufuna ukubonisa ubuhlobo babo kuwe
kwibhokisi Iphone emangalisayo (Nantso ibhonasi ekhethekileyo kum ^^)
Ndifuna ukubamba le nkampani ukuba iqabane lam,
Kodwa que c'est la c'est la, loo nto abemi behlabathi sonke ngenxa.
Ngoko ke apha ukuba ndithanda ukunikela umbulelo ekhethekileyo kubo
Ibhalwe ngu Matt Charles, AU
Sivuyile kuba impendulo fast kunye nonikezo,
- Baguqula design product i ngokweemfuno zethu,
- Zonke iinkcukacha ukuba sifuna banikwa,
- umgangatho imveliso Good,
- Wamkela ukuguqulwa komyalelo ngaphandle kokulibazisa,
- Usenokukwazi ukufumana impendulo kwimibuzo yakho ngexesha,
- Babexhasana waza wasinceda kuba zonke iingxaki esasijongene kwisigaba ukuthunyelwa kulo naliphi na ixesha nkqu zobusuku kunye veki
Ibhalwe ngu Ray, Canada
Kufuneka bathi, baye basebenza kanzima kum ukwenza oko kwakufuneka. Emva sifika kwi kuyilo page ubulumko (imizobo kunye schematics kwemveliso) inkqubo wayelele. Ndafumana imveliso kakuhle phambi kokuba kulindelwe, elungiswe kakuhle kakhulu kulindelekileyo. Ngamafutshane, ukuba ufuna nantoni nikeza (kwimeko yam yomgama actuator unique) I sincoma kakhulu! bekuya isindululo umhlobo!
Ndafumana ukusebenzelana kwinkampani elula ngqo phambili - nangona kunjalo umthengi kufuneka abe nofifi ezinye into abayifunayo ubuza umbuzo ukuba akuqinisekanga - Unxibelelwano ngokupheleleyo odola off le nkampani kulula.
Kwaba mnandi ukwenza ushishino nabo.
Stainless Gas bahambahamba , Ss316 Stainless Gas Spring, Stainless Gas Springs ,